Nezvedu | Mari yezvikamu Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited
RAYONE WHEELS, yakavambwa muna Chivabvu 2012, ibhizimusi remazuva ano repamusoro-soro iro rinogadzira dhizaini, kugadzira, uye kutengesa kwemavhiri ealuminium alloy mavhiri. RAYONE fekitori inovhara nzvimbo inopfuura mazana maviri emamirimita emamirimita, iine yakazara seti yehunyanzvi uye epamberi aruminiyamu yekugadzira vhiri uye yekuyedza michina.
Panyaya yeScale, iyo yazvino yekugadzira kugona ndeye 1 miriyoni mavhiri emota.
Panyaya yekugadzira tekinoroji, RAYONE ine giravhiti yekukanda nzira yekugadzira tambo, yakaderera-kumanikidza kukanda nzira yekugadzira tambo uye yekugadzira nzira yekugadzira tambo, iyo inogona kusangana zvakasiyana zvinodiwa nevatengi vakasiyana pasirese.
Panyaya yehutano vimbiso, RAYONE yapfuura IATF16949, yepasirese yemhando yemhando yemhando system. RAYONE akataura tekinoroji mwenje wechiedza chiwanikwa vhiri hub yemotokari muJapan kuve nechokwadi chekuchengetedza uye zvakavimbika zvemhando yepamusoro zvigadzirwa. Zvichakadaro, RAYONE ine auto hub performance laboratory ine yakazvimirira bvunzo kugona, iyo inosimbiswa mukuomerera zvinoenderana nematanho eVIA murabhoritari yeJapan mota yekuongorora musangano.
Panyaya yehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, RAYONE anotarisisa zvakanyanya kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye hunyanzvi hwekuvandudza, ane timu yehunyanzvi yehunyanzvi kuenderera mberi nekuunza uye kutora matekinoroji epamberi kubva kuEurope, America, Japan nedzimwe nyika, uye RAYONE inowana zvakanakira vamwe vekunze uye vekunze, inosanganisirwa neakanakisa anoenderana nevanhu dhizaini mazano uye akanakisa tekinoroji, uye inogara ichigadziriswa kuvandudza humba kuomarara, kudzikisira huremu huremu, kugadzirisa hub hub kuita muzvinhu zvese, uye kutevedzera yepasirese mota indasitiri magetsi ekuchengetedza zvinodiwa zvebudiriro.
Panyaya yekuvandudzwa kwemusika, RAYONE inosanganisa pamhepo uye pasiri pamhepo kupedzisa dhizaini yepasi rose nemhando yepamusoro zvigadzirwa nemasevhisi. Nemhando yepamusoro yechigadzirwa, mukurumbira wakanaka uye mhando yepamusoro sevhisi yechigadzirwa, RAYONE yakazopedzisira yakunda kurumbidzwa mumusika.
Panyaya yetarenda timu, RAYONE akanaka mukutsvaga matarenda, kubata kugona kweanogona, kuenderera nekukudziridza matarenda, kumisikidza matarenda 'kukurudzira mukati, uye kuzadzisa matarenda. RAYONE ine yepamusoro dhizaini dhizaini, yakasimba yekugona kugona, yakagamuchirwa yakawanda yekushambadzira modhi yevakuru veuto, yakaunganidza hupfumi hunoshanda ruzivo, uye kugona manejimendi manejimendi kusangana nezvinodiwa zvekuvandudzwa kwenguva, zvine simba dhizaini uye R & D kugona.
Iko Kune Mota Iko Kwairi Rayone
Isu Tinogara Tiri paInternet
Kugadzira kukosha kwevatengi
Kutungamira fashoni uye kuona kuchengetedzwa kwevanhu pakufamba
Kuve wepasi rose vhiri mhando inoremekedzwa zvikuru neiyo vhiri indasitiri
kuisa zvido zvevamwe pekutanga, Kuita zvakanakira zvese, Kubatana sevamwe, kushanda nesimba zuva nezuva, kugadzira zvitsva nguva dzese, kuva vakaomarara, kukwikwidzana nesu pachedu pakuita zvirinani uye zviri nani, zvinangwa
Vanhu vese rudo uye kushuvira hupenyu huri nani hazvina kumboshanduka. Hupenyu hwakanaka, kuravira kwakanaka!
Chikwata cheRAYONE chakazvipira kuendesa runako kuzviuru zvemhuri, kubatanidza zvinhu zvemazuva ano uye zvefashoni nepfungwa yesainzi uye tekinoroji mumavhiri emota, uye nekushandura mavhiri kuita artworks.
RAYONE anotevedzera zvinoenderana nezvinodiwa uye kudzora kwazviri, usambokanganwa chinangwa chepakutanga mukutsungirira, uye chengetedza runako rwechokwadi.
Uchenjeri uye kuchengetedzwa kwerunako.
Hukuru hwese hunoda kushingirira. Mumwe nemumwe anofanirwa kuchengeta mupfungwa hope dzekutanga. Takatarisa kurota uku, isu ticharamba tichishingirira uye tichiedza kuita kwedu bhuruu gungwa nedenga rebhuruu. RAYONE ichave iri padivi pako nekusingaperi.